आफ्नै देशमा हीरा फल्छ किन जाने विदेश ! - Janapukar
आफ्नै देशमा हीरा फल्छ किन जाने विदेश !
१४ मार्च, २०१७ ,मोरङ - पूर्वी मोरङ उर्लाबारीका सचिन शाक्य धन कमाउने सपना साँचेर विदेशिए । विदेशमा पाँच महिना हाडछाला घोट्दा एक पैसा पनि तलब पाएनन् । पटक–पटक तलब माग्दा कम्पनी साहुले वास्तै नगरेपछि उनी नेपाली दूतावासको शरणमा पुगे । दुतावासले लेबर कोडमा जान सल्लाह दियो । त्यसपछि उनले एक निर्माण कम्पनीमा आठ महिना काम गरे । र, स्वदेश फर्किए ।
विदेशमा अनेक हन्डर ठक्कर खाएर स्वदेश फर्केका उनी अहिले उर्लाबारीमा सूर्यकमल निर्माण सेवा कम्पनी खोलेर उद्यमी बनेका छन् । होटल व्यवसायमा समेत हात हालेका उनी दमकको होटल वन्र्डल्याण्डका सञ्चालक पनि हुन् । यसमा धेरै युवालाई रोजगारी दिएका छन् । काम गर्ने जाँगर र मिहिनेत गर्ने बानी भए स्वदेशमै प्रशस्त धन कमाउन सकिने अनुभव उनी सुनाउँछन् । समाजसेवामा पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै उनलाई स्थानीय सञ्चार क्लबले सम्मानसमेत गरिसकेको छ । सफल उद्यमीका रुपमा परिचित शाक्य पूर्वाञ्चल टिफर व्यवसायी संगठनका सदस्य पनि हुन् । विदेश आकाशको फल भएको भन्दै उनी काम गर्ने जाँगर र हातमा सीप नभए त्यहाँ कुकुरले नपाइने गोता पाइने बताउँछन् ।
त्यस्तै, उर्लाबारीकै राजु लामा पनि धेरै धन कमाउने सपना बोकेर २०६२ सालमा दुबई पुगे । त्यहीँबाट २०६७ सालमा बेलायत उडे । त्यहाँ निकै गोता पाएर स्वदेश फर्किए । फर्केपछि स्थानीय सुमन राईसँग मिलेर ६० लाख रुपैयाँको लागतमा लाइट हाउस व्यवसाय सञ्चालन थाले । झापाको दमकमा बुलेट मोटर साइकलको शोरुम, उर्लाबारीमा छिरिङ ट्राभल्स एण्ड टुर्स र पाल्मो इन्टरप्राइजेज समेतको सञ्चालन गरेका उनी बुद्धि, विवेक पु¥याएर काम गरे यहीँ मनग्य धन आर्जन गर्न सकिने बताउँछन् । यस क्षेत्रका सामाजसेवीका रुपमा समेत परिचित उनी भिजन फाउन्डेशनका अध्यक्ष पनि हुन् । उनी दाबाका साथ भन्छन्, ‘सीप सिकेर स्वदेशमै पसिना बगाउने बानी बसाले यहाँको माटोमा सुन र हीरा दुवै फलाउन सकिन्छ ।’
त्यस्तै, मकाउमा ६ वर्ष सेक्युरिटी र २ वर्ष सीसी क्यामरा अपरेटर बनेर फर्केका उर्लाबारी– ४ का पूर्णसिंह लिम्बू अहिले यहाँ मोटरसाइकल शोरुम सञ्चालक बनेका छन् । आँट र मिहिनेतले विदेशको भन्दा राम्रो कमाइ यही भएको उनको अनुभव छ । पाँच जनालाई रोजगारी दिएका उनले कामदारहरु पनि आफूले दिएको तलबबाटसन्तुष्ट रहेको बताउँछन् । सबै खर्च कटाएर मासिक ५० हजार रुपैयाँ बचत भइरहेको उनको भनाइ छ । व्यवसायी मात्र नभई उनी पनि कुशल समाजसेवी बनेका छन् ।
उर्लाबारी –४ कै पवन वाइबाले मोबाइल पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् । २०६४ सालमा ७५ हजार रुपैयाँले व्यवसाय सञ्चालन गरेका उनले अहिले आफ्नो व्यवसाय बढाएर ७५ लाख रुपैयाँ पुर्याएका छन् । काठमाडौंमा १५ दिने मोबाइल मर्मत तालिम लिएर व्यवसाय थालेका उनले अहिले पाँच जनालाई रोजगारी समेत दिएका छन् । व्यवसाय गर्नुअघि विदेश जान तम्सेका उनी दलालले दुई लाख रुपैयाँ खाएर फरार भएपछि यतातिर हात हालेको बताउँछन् । यही ठाउँका दीपक पोमु सेवारो टेलिफोन सेवाका सञ्चालक हुन् । तीन जनालाई रोजगारी दिएका उनले सबै खर्च कटाएर मासिक ५० हजार बचत गरिरहेका छन् । टेलिफोन सेवासँगै ट्राभल्स एण्ड टुर्स समेत सञ्चालन गर्दै आएका उनी आगामी दिनमा यसको क्षेत्र विस्तार गर्ने सोचमा छन् ।
उर्लाबारी कै देवेन्द्र बस्नेत र गोपाल बस्नेतले च्याउखेती गरेर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । उनीहरु भन्छन्– ‘मिहिनेत गर्ने हो भने डलर आफ्नै देशमा कमाइन्छ, परिश्रम गर्ने हो भने ढुङ्गामा पनि सुन फलाउन सकिन्छ ।’ आधुनिक च्याउ खेती गरिरहेका यी दाजुभाइले मासिक तीन लाख रुपैयाँ बराबरको च्याउ उत्पादन गर्ने गरेका छन् । २५ वटा टहरामा हाल २० हजार पोका च्याउ उत्पादन गरिरहेका उनीहरुले दैनिक ५ सयदेखि सात सय किलो च्याउ बिक्री गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, उर्लाबारी १ का नुतन राई पिके ट्राभल्स एन्ड टुर्सका सञ्चालक हुन् । यसबाट मासिक ३० हजार आम्दानी गरिरहेका छन् । विदेश जाने सपना बोकेर पासपोर्ट बनाए पनि अहिले त्यो रहर मरेको र स्वदेशमै भविष्य कोर्न सफल भएको उनी बताउँछन् । गाउँमा हुने हरेक सामाजिक काममा पनि सहभागी हुँदै आएका उनी घर परिवार त्यागेर विरानो ठाउँमा धनको आशमा परदेशिनको साटो बुद्धि, विवेक लगाएर मिहिनेत गरे यहीँ प्रशस्त सम्भावना रहेको औंल्याउँ छन् ।